इन्द्रबहादुर सार्कीलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको उपहार
नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको जेठ २१ गते एक वर्ष पुग्छ । तर इन्द्रबहादुर सार्कीको पीडा हेर्दा यो घोषणाको कुनै हैसियत छैन । जेठ १५ गते मैले पहिलोपटक दैलेख टेकेँ । १६ गते साँझ ६ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि १५-२० जनाको भीड देखियो । त्यहाँ दुई बहिनीहरूले बोलाएर भने, हेर्नुस् यहाँको अवस्था । मैले घटना बुझ्ने प्रयास गरेँ ।हुलको बीचमा स्ट्रेचरमाथि सुताइएको घाइतेलाई देखाउँदै उनका आफन्तले भने- ‘हजुर भात छोइयो भनेर भीरबाट हुत्याइदिए ।’ विस्तारमा कुरो बुझ्दै जाँदा जेठ १४ गते साँझ ८ बजे नारायण नगरपालिका वडा नं ६ भुर्ती गाउँका २३ वषर्ीय इन्द्रबहादुर सार्की आफ्ना १३ वषर्ीय भाइसँग धानको बीउमा पानी लाउन खेत जाँदैरहेछन् । धानकै बीउमा पानी लगाएर फर्किएका जनक न्यौपाने, हरि न्यौपाने र प्रदीप न्यौपानेसँग उनीहरूको जम्काभेट भयो । न्यौपाने दाजुभाइले भात खेतमै बसेर खाने भनेर लगेका रहेछन् । पानी नभएको कारण भात फर्काएर ल्याउँदै रहेछन् । तलतिरबाट उक्लेका सार्की दाजुभाइ मास्तिरबाट आएका न्यौपाने दाजुभाइसँग बाटोमा छोइएछन् । जनक न्यौपानेले भात किन छोइस् डुम भनेर गाली गर्दै इन्द्रबहादुर सार्कीलाई मुक्का हानेछन् र भीरबाट हुत्याइदिएछन् । झन्डै ५० मिटर तल पुगेका इन्द्रलाई आधा घन्टापछि गाउँलेले उद्धार गरेका रहेछन् । इन्द्रको जीउमा लागेको घाउ हेर्ने हो भने उनी संयोगले मात्र जीवित रहेको सहजै अनुमान लाउन सकिन्थ्यो ।
भोलिपल्ट बिहानै सार्की समुदाय घाइते बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न आएका रहेछन् । घाउ जाँच गराइपाउँ भनेर निवेदन दिएछन् । त्यसपछि अस्पतालमा बिरामीलाई उपचार गर्न भर्ना गराएछन् । अस्पतालमा सामान्य उपचार गरेर घर लैजाउ भनी १६ गते ४ बजे पठाइएछ । जबकि घाइतेको स्थिति र घाउ हेर्दा हप्तौंसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने देखिन्थ्यो । घाइतेका आफन्तले भने, हजुर भीरबाट हुत्याउने मान्छे एमाले नेता हो । एमाले पार्टीको पावरले गर्दा प्रहरीले दोषीलाई कारबाही गरेन । एमालेको अफिसमा पनि गयौं, वास्ता गरेनन् । भीरबाट हुत्याउने एमाले निकट अनेरास्ववियु दैलेख जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष रहेछन् ।
मैले पीडितहरू अगाडि दुई-चार शब्द बोलेँ, एमाले नेता ईश्वर पोखरेल पनि दैलेख आउनुभएको छ, उहाँलाई घाइते देखाउनुपथ्र्योर् नि, निसाफ पाइन्थ्यो कि । घटना हेर्दा साह्रै अन्याय भएजस्तो लाग्यो मलाई । मागेर दलितले निसाफ भेट्दैन । घाइतेलाई यो अवस्थामा घर लानुभन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि हामी सबै बसेर धर्ना दिऊँ ।
मेरा कुराले दलितहरू उत्साहित भए । झन्डै एक घन्टा अत्यन्त शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना बस्ने कार्य भयो । मैले काठमाडौंमा गणेश विकेलाई फोन गरेर घटनामा एमाले कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको बताएँ । कान्तिपुर समाचारदाता काठमाडौं गएको थाहा पाएर उहीँ गुणराज लुइँटेललाई फोन गरेँ । पीडितको फोटो इमेल गर्छु, समाचार छापिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरेँ । उहाँको सम्मति पाएपछि म इमेल गर्न साइवर गएँ । अचानक विद्युत आपूर्ति बन्द भएकोले फोटो पनि पठाउन सकिएन । हामी तीनजना ईश्वरी नेपाल, कृष्ण चन्द र म होटलतिर फर्किरहेका थियौं ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि जम्मा भएको भीडले हामीलाई घेरा हाल्यो । भीडमा प्रहरी पनि थिए । एक प्रहरीले मलाई समातेर डीएसपीसाबले बोलाउनु भा’छ हिँड्नुस् भन्ो । म जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पसेँ । बाहिरबाट एउटा हुल पिट्, मार्, हान् भन्दै मसँगै भित्र पस्यो । भित्र गएर बेञ्चमा बस्नेबित्तिकै डीएसपी मोहनराज जोशीले सोधे, तपाईं को हो र के काम गर्नुहुन्छ ? मैले आफ्नो परिचय दिएँ । गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने गरेको र लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनमा सरिक रहेको बताएँ । मेरो कुरा सकिन नपाउँदै डीएसपी जंगिए । अपमानजनक किसिमले अपशब्द निकाल्दै तैंले तुरुन्त जिल्ला छोड्नुपर्छ भन्नथाले । कुर्सीबाट जुरुक्क उठेर मुड्की उज्ज्याए ममाथि । मैले कडा प्रतिवाद गरेँ । मानवीय हिसाबले व्यवहार गर्न डीएसपीलाई आग्रह गरेपछि उनी केही शान्त भए । त्यसपछि मसँगै भित्र पसेको हुलले विवाद थाल्यो । हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेता ईश्वर पोखरेलको नाम किन लिइस् तैंले भन्नथाले । एमालेको हुल पिटुँला र मारुँलाझैं गरी खनिएपछि डीएसपी फेरि जंगिए । डीएसपी भन्दै थिए, यो प्रतिगमनकारी राजावादी मान्छे हुनुपर्छ वा फोरमको पो भन्नथाले ।
२३ गते यहाँ विश्व हिन्दू महासंघले हिंसा भड्काउनेगरी पुराण लगाउन पर्चा छरेको छ -पर्चा पढेर सुनाउँदै) यो त्यही कामको लागि तयारी गर्न आएको हो । दैलेखका गैससहरूलाई पार्टीविरुद्ध उतार्न यो आएको हो । डीएसपी आरोप लगाउँदै जाने र एमालेगण हो-हो भन्दै समर्थन गर्दै जाने । मैले जुन-जुन फोनबाट काठमाडौं फोन गरेको थिएँ, त्ाी-ती पसले आएर यसो भन्यो, यस्तो बोल्यो भनेर बेलिविस्तार लगाउन थाले ।
मैले सकभर प्रतिवाद गर्न खोजेँ । म प्रतिगमनकारी र दरबारिया होइन । म लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय मान्छे हुँ । शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिने र स्वस्थ किसिमले विरोध गर्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा । एमाले गणलाई भनेँ, तपाईंहरूको विरोधमा बोल्दा यस्तो गर्नुहुन्छ भने वाईसीएलको कामको ब्यथ्र्यै विरोध गर्नुहुन्छ तपाईंहरू । उस्तै काम गर्न खोज्नुभएको हो ? स्थिति अत्यन्तै विष्फोटक बनिसकेको रहेछ । मेरो कुनै कुराले कसैलाई कुनै असर नगर्ने देखियो । प्रहरी कार्यालयभित्रै आइलाग्ने स्थिति पो भयो । डीएसपीले भने, तपाईं तुरुन्तै दैलेख छोड्नुस् । हामी सुरक्षा गर्न सक्दैनौं । मैले पिटाइ खानबाट जोगिने अरू कुनै उपाय तत्काल देखिन । म र मेरा साथीहरूले तत्काल बच्नका लागि भन्यौं, हामी पनि एमालेकै कार्यकर्ता हौं । पार्टी र नेताविरुद्ध केही गल्ती बोलिएछ भने क्षमा गर्नुहोला भन्दै माफी माग्यौं । एमाले गणले धम्की दिए, पत्रिकामा घटना छापिए भोलि ठीक हुने छैन । यति भनेर एमालेगण प्रहरी कार्यालयबाट निस्किए ।
बाहिर निस्किनासाथ मसँगै घुमिरहेका स्थानीय व्यक्ति कृष्ण चन्दलाई एमाले गणका केही भद्रहरूले प्रहरीकै अगाडि कुटपिट गरे । प्रहरीले कृष्ण चन्दलाई हिरासतमा लियो ।
रातको ११ बजिसकेको थियो । डीएसपीले यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, होटलमा नै जानुस् भनेर चोर बाटोबाट निस्कन भने । उनले सुरक्षाका लागि भोलि बिहान ५ बजे नै जिप्रकामा आइपुग्न भने । हामी चोर बाटोबाट होटलतिर लाग्यौं । भोलिपल्ट ५ बजे म पुनः जिप्रका प्रवेश गरेँ । ७ बजे डीएसपीसंग भेट भयो । उनले भने, तपाईंको कारण जिल्लाको सुरक्षास्थिति बिगि्रयो । आज ६ पार्टी मिलेर ४ वटा गैससमा आगो झोस्ने योजना बनाएका छन् । तपाईंलाई यहाँबाट बचाएर निकाल्न नसकिने भयो । कसरी बच्नुहुन्छ, आफैं बच्नुस् ।
मित्र लीला टमाटा र किशोर होटलका साहू ध्रुव श्रेष्ठको प्रयासमा एमाले नेताहरूसँग बिहान ८ बजे वार्ता भयो । एमाले पार्टी र नेताको नाम लिएकोमा क्षमा माग्ने र पत्रिकामा घटना नछापिने सर्तमा मैले तालिम चलाउन पाउने भएँ । मैले नेताहरूको आदेश मानेँ । म उहिले एमाले भए पनि ०४८ सालपछि एमाले नरहेको पनि बताएँ । राति भीडबाट बच्न झूट बोलेकोमा क्षमा मागेँ । एमाले जिल्ला उपसचिव लक्ष्मी पोखरेल निकै शालीन हुनहुँदोरहेछ । उहाँले भन्नुभयो, तपाईंकी बहिनी सम्झनाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले सोभियत संघ विघटन हुनाको कारण जातीय द्वन्द्व बताउँदै दैलेखको घटनालाई जातीय रूपमा नहेरी वर्गीय रूपमा हेर्न गैससहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले पार्टी र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम नगर्न पनि सम्झाउनुभयो । डर र त्रासमा २ दिन दैलेख बसेर तालिम चलाइयो । १९ गते सुर्खेत झरियो । अन्त्यमा एमाले जिल्ला कमिटीका दलित सदस्य गोपाल नेपालीले भन्नुभयो, दुवै पक्ष हाम्रो पार्टीका हुन् । हामी आफैं मिलाउँछौं ।
म जतिबेला प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आन्दोलनकारीहरूसँग थिएँ, डीएसपीसाब आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठी बर्साउने काममा हुनुहुन्थ्यो होला । अहिले नं १ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हुनुभएछ । बधाई छ, तपाईंलाई । तपाईंले आरोप लगाएर मेरो छवि बिगि्रँदैन । तर तपाईंले पीडित इन्द्रबहादुर सार्कीलाई भात छोएकोले भीरबाट हुत्याउने जनक न्यौपानेलाई थुनामा राखेर कारबाही चलाउनुभएन । बरु अलिअलि औषधी खर्च देऊ र मिलाऊ है भाइ भन्दै जिप्रकाबाट ससम्मान घर पठाउनुभयो । यो मेरै अगाडि भएको घटना हो । त्यसकारण म भन्छु, तपाईं दलित विरोधी र ब्राह्मणवादी डीएसपी हो । एमालेका नेता गणसँग मेरो आग्रह छ, मलाई जति अपमान र बेइज्जती गरे पनि कुनै गुनासो छैन । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, दण्डहीनताको विरोध गर्ने कर्तव्य र दलितप्रति निष्ठाको कारण म यति भन्न बाध्य छु, इन्द्रबहादुर सार्कीलाई भात छोएकै कारण एमाले निकट अनेरास्ववियु दैलेखका उपाध्यक्ष जनक न्यौपानेले भीरबाट हुत्याएकै हुन् । यस घटनामा जनक दोषी हुन् । उनीमाथि राज्यले कुटपिट र छुवाछूतको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ र त्यसका लागि एमालेले पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पार्टीबाट पनि उनलाई निष्कासन गरेर महासचिव माधव नेपालको दलितवादी घोषणाको इज्जत राख्नुपर्छ । यो घटनालाई टालटुल गरेर पार्टीमा नै मिलाउन खोजे एमालेले छुवाछूतलाई संरक्षण गरेको ठहर्छ ।
एमाले जिल्ला कमिटीका दलित सदस्य गोपाल नेपाली, घटना मिलाउनु भनेको न्याय गर्नु होइन । हेर्नुहोस्, इन्द्रबहादुरको ज्यानमाथिको चोट । उनी अहिलेसम्म पनि उचित उपचार नपाएर घाइते छन् । के यो छुवाछूत मुक्त राष्ट्रमा दलितले पाउने उपहार हो ?
ट्यागहरु : Article rajendraonline, समचार
← छुवाछूत मूक्त घोषणाको आज एक वर्ष
One thought on “छुवाछूत मूक्त घोषणाको एक वर्ष”
kaushal on जुन 7, 2007 मा 12:20 अपराह्न said:
thank u very much Arjun thapaliya ji,
tapai le dekhaunu vayako dalit samudaya prati ko lagan lai hami kadar gardachhau .
Tara a.ne.ra.so.bi.u. ko kathit upadhksha, kujat, pakhandi JANAK NEUPANE lai dhikkar chha. burjuwa saikshik pranali ko Ahankari bramhanbadi, hindu atibadi janak prabriti ko birodh garau .
Testa paji haru lai bachnu vanda marnu nai thik chha.
Arko sarkari khol odhera damakari DSP, MOHANRAJ JOSHI (GUNDARAJ ) rakshes lai thukka chha. dalit samudayako TAX bata talab khayara DSP va ko chor le uniharuko raksha garnu ko sato vaksha gareko chha. junthal ma khhayo tehi thal chhed gareko chha . Testa ayogya harule kunai jagir garnu layak chhainan. tesaile ti sabai attya chari haru lai autai khaldo ma purna ko lagi ATMADAHA garna sujhab dina chhahanchhu